रोचक Archives | बिगुल न्यूज
विश्वका यी ५ रहस्यमयी जीव जसको बारेमा सुन्नुभएको त होला तर पक्कै देख्नु भएको छैन !
असार ३२, २०७५ बिगुल न्यूज - ST
हामीहरु पुराण वा शास्त्रमा उल्लेख गरिएका कुराहरुलाई सजिलै विश्वास गर्न सक्छौ किनभने हामी त्यहाँ बताईएका कुराहरुमा आस्था राख्ने गर्छौ। तपाईहरुलाई थाहानै छ कि पहिलेका रामायण वा महाभारत काल का थुप्रै …
विश्वका केही मानिसहरु जोसँग छ सुपर पावर ! हेर्नुहोस् असामान्य शक्ति भएका व्यक्तिहरु !
संसारका केही मान्छेहरुमा विज्ञानलाई समेत अचम्मित पर्ने जदुवत शक्ति रहेको छ । मान्छेबाट नै देखाएका यी कुराहरु कसरी सम्भब भए भन्ने बारे जो कोहीले सोच्नु कुनै ठूलो कुरा होइन । …
सामाजिक संजालमा खोजेर पनि पाउनु हुने छैन यी तस्विर ! हाँसो रोक्न नसकिने तस्विरहरु हेर्नुहोस् !
आजकल जो कोहीको पनि तस्विर खिचाउने शौख रहने हुन्छ भने अहिले मानिसहरु तस्विर जस्तो सुकै अवस्थामा पनि खिचाउन पछि नहट्ने गर्छन्। भन्ने गरिन्छ की तस्वीरले आफै कथा बताउने गर्छ। पछिल्लो …
यी अक्षरबाट नाम शुरु हुनेहरुलाई कहिले पनि मिल्दैन चोखो माया ! पाउँछन् दुख मात्रै !
असार ३१, २०७५ बिगुल न्यूज - ST
कुनै पनि मानिसले जीवनमा सच्चा माया पायो भने हरकुराहरु लडेर आफ्नो खुशी पाउन सक्छ । तर कुनै पनि व्यक्तिलाई अरु कोहिबाट झुटो प्रेम गरेको नाटक बुज्न नसक्दा जीवननै तहसनहस हुन …
पाहुनालाई स्वागत गर्ने यस्तो पनि हुन्छ तरिका ? यसरि स्वागत गरियो भने के गर्नुहुन्छ ! तस्विरहरु !
आफ्नो घर धेर आकर्षक बनाउनको लागि मानिसहरु लाखौ रुपैया लगाउने गर्छन् भने एक घरले आफ्नो इज्जत दर्शाउने मानिसहरुको मान्यता रही आएको छ। घरमा महँगा चिजहरु राखेर घर सजाउनेको पनि कमि …
२ महिना मात्रै पुगेकी छोरीको हत्या गरे यी पिताले ! हत्या पछि जीउँदो बनाउन गरे यस्तो अजिव काम !
आफ्नो सन्तानको लागि जुनै पनि हदसम्मको दुख गर्न पछि नहट्ने माता-पिता सबैको आदरणीय हुने गर्छन् भने हरेक सन्तानको भविष्य एक अभिभावकको हातमा निहित हुने गर्छ। यहि कारणले गर्दा माता-पितालाई हरेकले …
नग्न भएर यी मोडलले आफ्नो प्रेमीसँग फेरी गरिन् यस्तो हर्कत ! बाहिरिए तस्विर ! हेर्नुहोस्
असार ३०, २०७५ बिगुल न्यूज - ST
बेलायती मोडल केटी प्राइस केही समय अगाडी मात्रै स्विमिंग पुलमा आफ्नो प्रेमीसँग कामुक अवतारमा देखा पारेर चर्चामा आएकी थिइन्। उक्त समयमा उनले आफ्नो र प्रेमीको तस्विरहरु सामाजिक संजालमा अपलोड गरेकी …
मृत्यु पछि पनि महिलाले बच्चालाई जन्म दिईन्, भयो चमत्कार
असार ३०, २०७५ बिगुल न्यूज - DG
काठमाडौँ : मनुष्यको जीवनमा केही यस्ता चिजहरु हुन्छन् जो चमत्कार भन्दा कम हुँदैन। यस्तै चमत्कार दक्षिण अफ्रिकाको ईस्टर्न केप प्रान्त स्थित मथायिसी गाउँ(Mthayisi village)मा देखिएको छ जहाँ एक महिलाले मृत्युको …
जुक्ति होस् त यस्तो ! हाँसो रोक्न नसकिने जुक्तिहरु हेर्नुहोस् ! (तस्विरहरु)
एक तस्वीरले कहानीनै बताउने कुरामा कसैको पनि दुई मत नहोला। तस्विर आफै बोल्छ भन्ने चलन पनि रहीआएको छ। एकै तस्वीरले रोदन ल्याउन सक्छ भने हाँसो पनि ल्याउन सक्ने क्षमता राख्ने …
भारतको आगरामा एक युवकले फेसबुकमा लाइभ बसेर आत्महत्या गरेका छन्। उनले आफ्नो कोठामा झुण्डीएर आत्महत्या गरेका हुन् ।अहिले उक्त घटनाको भारतीय प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। आफ्नो प्राण त्याग्नु अगि उनले …
२२ मिनेट अगाडि बिगुल न्यूज - ST